I-gvSIG 1.9 RC1, ilungele ukukhuphela-iGeofumadas
Ikhaya/GvSIG/gvSIG 1.9 RC1, ilungele ukulanda
Kukulungele khuphela i gvSIG I-1.9 RC1, inguqu yokuqala yokukhishwa komviwa (Ukukhishwa Umviwa) kwi-1243 Build 313 ka-Agasti.
Ukhuphelo luthathe ixesha, kuba ekuqaleni i-gvsig.org ibingasebenzi, apho ulwakhiwo lukhutshelwa khona, emva koko uguqulelo olukhoyo xa uziphu kunye nokwenza oko luvele njengefayile eyonakeleyo. Kodwa ekugqibeleni nantsi, ukuze sisebenzise, ​​sivavanye, kwaye sinike ingxelo ngemiba.
Ngeli xesha ndingayifumana imilayezo engaqhelekanga, ndiyisebenzisa kwi-Acer Aspire One Netbook, kwaye kubonakala ngathi ayiyi kubulala imemori kakhulu, nangona Akukona umshini ophezulu wokusebenza. Ndiyazibona iiprojekthi ezazenziwe ngaphambili kwaye ndiyathemba ukuba ziya kuvavanya ukusebenza kwazo kwezi ntsuku zolonwabo.
Ngokuphathelele ukuphucula, zininzi, ndiza kuthatha ixesha lokuvavanya, ekugqibeleni kuyafaneleka ukuba sonke sineenguqu ebonisa iimfuno kunye neengxaki eziphakanyiswe luluntu.
Iphaneli esecaleni yolawulo lwendlela yokusebenza iyasebenza, kodwa okwangoku ndidibene nokungonwabi okungafanelekanga ngokwamaqela. Esinye sezizathu zokubeka ngokwamaqela kukwenza ukuphatha okusebenzayo ngakumbi, uphawu lokudibanisa luvumela ukufihla umboniso weqela ngaphakathi kweqela.
-Kodwa ixesha ngalinye ukutshintsha okulula kufakelwa kwiphaneli yokulawula umgca efana ne:
Ukuthwala isalathisi esitsha
Shintsha isimboli soluhlu
Yenza iqela elitsha lamacandelo
Hlehlisa iqela lemibala
Beka uluhlu phakathi kweqela elithile
Onke amaqela aboniswa ngendlela engatyhilelwanga, eyenza ukuba idinise ukuba uneqela. Kwaye andinasifumana isizathu sokuba, kufanele ukuba kugcinwe ukuhanjiswa kokuhanjiswa.
Ubomi bezi zixhobo kuluntu, ndincoma ukuba bayilande, bayidlale, yizame, musa ukuyisebenzisela umsebenzi osemthethweni, kodwa nibambe iqhaza ekuqinisekiseni kwayo, kuba oko kuxhomekeke ekubeni baneliseke ngakumbi kwinguqu echanekileyo.
Apha banako khuphela i nguqulo kwaye apha uyabona uluhlu lweendaba.
Acer balangazelela GvSIG OS
Inkomfa ye-14 yeHlabathi ye-gvSIG: “UQoqosho neMveliso”
I-GIS Software Alternatives